UKsenia Sobchak, iindaba zakutshanje, uMaxim Vitorgan, amahlazo
Kwiinyanga ezimbini neyesibini uKsenia Sobchak kunye noMaxim Vitorgan baya kubhiyozela umtshato wesikhumba: kuya kuba yiminyaka emithathu ukususela kwintsapho yabo. Nangona kukho iziganeko zabaxholi, u-Xenia noMaxim ngeli xesha babenako ukubonisa ukuba umanyano wabo unamandla kwaye uhambelana. Amaqabane ayenayo nje into enomdla, kodwa kwakhona sele esanda kusebenza kunye.
U-Ksenia Sobchak wenza intetho yakhe kwinqanaba kulo nyaka, edlala uFekla Ivanovna ekuveliseni "umtshato" kaGogol. Umbonisi weTV, lo msebenzi ubaluleke kakhulu, njengoko edlala kunye neMaxim Vitorgan kwisigaba. Ngobusuku u-Xenia noMaxim baya kukholisa abaphulaphuli, abaza kudlala.
Kwiphepha lakhe kwi-Instagram, apho umphathiswa we-TV unokwabelana ngeendaba zakutsha, uSobchak wavuma kubabhalisile ukuba wayeyika uMaxim, owathi wagxekisa italente yakhe esebenzayo:
Ndandisoloko ndiphupha ngokungahlali kuphela, kodwa ndisebenza kunye nomthandayo. Ngokuqinisekileyo, "soyika iminqweno yakho." Ngobusuku ukusebenza, kwaye ndiloyike kakade :) @mvitorgan undigxeka ngokuphambuka kancinci kwinqanaba. "Ewe, ubuncinane andiyenzi inyama yezilwanyana" -ndiyidla.
UAlexander Ovechkin noAnastasia Shubskaya batshata?
U-Ksenia Sobchak uye wabonisa ukuba akanalo i-cellulite
UFiliy Kirkorov waqhatha ababhalisile kwi-Instagram
Ulungelelaniso lwezithuthi lubuyela kuDmitry Hvorostovsky
Ngaba kufanelekile ukuxhatshazwa ngumyeni wakhe
Ingaphakathi kunye noyilo lwezindlu zanamhlanje
Iwayini esuka kumaapulo ekhaya: ezilula zokutyelela ngeyiteyathelo